« Olom-bitsy » -
AccueilTresaka« Olom-bitsy »
« Olom-bitsy »
11/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Samy te hahazo toerana ao anatin’io governemantan’i Christian Ntsay io avokoa ireo depioten’ny 13 mey, ka ny sasany dia tsy menatra mihitsy ny manao nofy ririnina. Tsy mety hono izy raha tsy tendrena ho minisitry ny Fitsarana kanefa ny diploma sy ny sehatr’asa nisy azy aza tsy misy ifandraisany amin’ny raharaham-pitsarana. Raha mba “magistrat de Premier grade” mba azo ninoan’ny olona ihany ilay nofy ririnina. Toa izany koa ny depiote namany mbola eny amin’ny 13 mey ihany. Ny galona kaomisera kanefa mitomany hatao minisitry ny Filaminam-bahoaka. Tia hanikanika hoy ny fitenenana kanefa kely vovok’aina.
Tsy izao rehetra manofy ririnina rehetra izao no hahazo toerana sy mendrika ny ho minisitra. Na hitohy hatrany amin’ny 2019 aza io hetsika eo amin’ny 13 mey io, dia tsy ny olona tahaka izany kosa no hitana ireny toerana stratejika ireny. Minisitera iankinan’ny fiainam-bahoaka mihitsy ny Fitsarana sy ny Filaminam-bahoaka. Olon-kendry mahafeno fepetra no mendrika amin’izany.
Miresaka an’izany fahamendrehana izany ihany isika. Moa va mendrika ny ho minisitra tokoa ireo depioten’ny fanovana miady seza ireo? Tokony ho toetrana minisitra ve ireny manao barofo manidy gadana ny minisitera sy fitarihana ny zana-bahoaka handao ny fianarany ireny? Mandany lalàna sy manao lalàna ihany no mahatsara ireo depioten’ny 13 mey ireo, satria any izy afaka mivazavaza sy mifanasa vangy tahaka io hataony eo amin’ny kianjan’ny Parvis Analakely io.
Diso lalana sy mivaona amin’ny tsy tokony ho izy ny fiainam-pirenena raha olona tahaka izany no tendrena ho minisitra. Tato ho ato dia mivaona amin’ny andraikiny tanteraka ireto olomboafidy mpanao lalàna ireto. Te hibaiko sy te hametraka fanjakana kely anaty fanjakana lehibe. Te hitsoaka ny mafana sy ny mangatsiaka miainga avy eo amin’ny 13 mey, ary misora-tena ho miaraka amin’ny vahoaka kanefa tsy araka izany akory.
Tsy ny hevitry ny olom-bitsy no hamotehana ny firenena sy hambolena krizy vaovao indray. Efa maro no sorena sy tafintohina amin’io fihetsiky ny depioten’ny 13 mey io, ary izany no manaporofo fa olom-bitsy no miara-dia amin’izy ireo. Raha hetsiky ny vahoaka iray manontolo io angamba hatrany Anosizato sy hatrany Ambohidratrimo feno hipoka. Raha tena hetsiky ny vahoaka io tsy handany andro hanery olona sy haka olona any anaty minisitera izy ireo.
web 2.0 dans Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet
בניית מסת שריר dans Voahangy Rajaonarimampianina-Nandray anjara amin’ny fanadiovana ny Renivohitra
hot website dans Code de répression
Taip dans Fanafihana kamiao tao Ambositra-VOAROBA NY 100 TAPITRISA ARIARY
Hery Rajaonarimampianina : « Zava-dehibe ny fanajana ny lalàna »
Hery Rajaonarimampianina : Maro no tsy mankasitraka ny fakana fahefana eny an-dalambe
HVM Faritra Atsinanana : Miisa 28 ireo hitarika ny birao iraisam-paritra
lalàn’ny fifidianana : Tsy natao hanilihana n’iza n’iza
web 2.0: Recent Blogroll ... You may take a second to stop by the subject material from this web-sites we've linked…
בניית מסת שריר: If some one needs expert view about running a blog after that i suggest him/her to go to…
hot website: Sites we Like... Here are some totally unrelated web-sites to ours, however, just take a second and visit the…